Translate Latvian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Latvian to Myanmar (Burmese), Latvian to Myanmar (Burmese) translations, Latvian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Sveiks kā tev iet မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Vai ir kāds? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Es tevi tik ļoti mīlu ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Cik tas maksā hamburgers? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Vai jūs varat saukt man par taksometru? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Man žēl ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Es esmu ieinteresēts ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Mans lidojums bija aizkavējies အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Es esmu šeit biznesa labā ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Sveiki, mans vārds ir မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Man žēl, bet esmu precējusies ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Es gribētu tev jautāt ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Vai jūs varat aizvest mani uz lidostu? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Kāds ir laiks tieši tagad, lūdzu? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Kur ir tuvākā policijas iecirknis? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Vai es varu aizņemties jūsu tālruņa lādētāju, lūdzu? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Vai varat man palīdzēt? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Pasūtiet man dzērienu, lūdzu? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Cik tas maksā? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Man ir alerģija pret lipekli ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Zvaniet ārstiem ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Vai ir ārsts? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Vai man ir iespēja zvanīt? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Zvaniet man savam bosam, lūdzu. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Šī vieta ir ļoti jauka ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Ņem mani pie viesnīcas, lūdzu ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Kāds ir manas telpas numurs? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?